Feng Shui: ဖုန်းရွှေ ဘယ်က လာသလဲ ?
ဖုန်းရွှေ ဘယ်က လာသလဲ ?
ခဲ့သော (ယိ့ကျင်း) ဆိုတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်တွင် ဗေဒေပညာ၊
ဖုန်းရွှေပညာ၊ ဟုဆိုပြီး တရုတ်လူမျိုးအချို့ယူဆခဲ့ကျသည်၊
ပြုပြင်နေထိုင်ခြင်းများ အကြောင်းကို အခြေခံကျကျ
ယိ့ ဆိုတာ ဖန်သီခြင်းဖြစ်သည်၊ (ဖန်းသီးခြင်းကျမ်းစာအုပ်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်)
ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်ကမ္ဘာအပြင်ဖက် အာကာသကို နားလည်သဘောပေါက်အောင်
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ တရုတ်စာပေ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းအုပ်ကြီး မစ္စတာ စိန်း က
တရုပ်ပြည် ပေကျင်းတွင် (ယိ့ကျင်း) ကျမ်းစာအုပ်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးဟောပြောသွားခဲ့သည်။
Posted by photo pyeaye at 8/02/2011 10:22:00 AM